Britian iyo Japan oo bixiyey lacag looga hortagayo khatarta dabaysha ee ku sii fidaysa Gobolka – Radio Daljir
Britian iyo Japan oo bixiyey lacag looga hortagayo khatarta dabaysha ee ku sii fidaysa Gobolka
Agoosto 6, 2013 10:13 b 0
Nairobi, Aug 6, 2013 – Dowladda Britian iyo Japan ayaa u gurmanaya gobolka Barriga Afrika oo uu wakhtigan ku sii kordhayo cudurka dabaysha oo haleelay caruur badan oo ku nool Soomaaliya, iyadoo cabsida xanuunkaasi ay wajahday haatan dalka Kenya.
Britian waxay shalay ku dhawaaqday in ay ku taageerayso Soomaaliya 10 Milyan oo Pound, si loo helo daryeel buuxa iyo adeegyo daawo oo talaal ah, Waxaana looga gol-leeyahay si talaal buuxa loo gaarsiiyo 6 Milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
Xog-hayaha arrimaha horumarinta Britian Justine Greening oo shaaciyey lacagta ay Britian ku bixinayso arrimaha talaalka Soomaaliya, waxaa uu sheegay in lacagtaasi ay sii marsiin doonaan hay?adaha caafimaadka aduunka ee WHO.
Mr. Greening wuxuu sheegay in horey loo shaaciyey in cudurka dabaysha laga cirib tiray aduunka, balse kiisaska ka soo cusboonaaday Soomaaliya ay yihiin khatar hor leh ku soo wajahan aduunka una baahan in laga hortago.
Docda kale hay?ada UNICEF ayaa sheegtay in ay ka heshay Japan 1.3 Milyan oo Dollar taasi oo ay xukuumada Tokyo u qorshaysay in wax lagaga qabto xanuunka ku sii baahaya gobolka Barriga ee Afrika ee dabaysha, hay?ada ayaa sheegtay in ay deeqdaasi tahay mid muhiim ah.
UNICEF waxay kaloo sheegtay in xanuunkaasi uu haatan naafeeyey in ka badan 100 caruur ah oo jooga Soomaaliya, sidoo kale waxaa jira tobbanaan kale oo ku sugan gudaha dalka kuwaasi oo aan helin dhibcanaha talaalka dabaysha, waxaana hay?adu ay sheegtay in khatarta xanuunkaasi ay ku sii faafayso dalka oo dhan.
Puntland oo jartay xiriirkii wadda-shaqeynta ee kala dhexeeyey dowladda federaalka ah Soomaaliya
Dugsiga sare ee Dangoroyo oo ku guulaystay kaalinta sadexaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin